AKHRISO: Go’aanadii Ka Soo Baxay Kulankii Golaha Qurba Joogta Koonfur Galbeed Soomaaliya | IshaBay Dhaba
AKHRISO: Go’aanadii Ka Soo Baxay Kulankii Golaha Qurba Joogta Koonfur Galbeed Soomaaliya
Posted by admin on Aug 24th, 2015 and filed under KEYDKA SAWIRADA IYO XULKA WARARKA, Warar. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
UJEEDO: WAR GELIN:
Marka ay taariikhdu ahayd August 22 2015, waxaa shir iskugu yimid xubnaha Golaha Qurba-joogtada Koonfur Galbeed, Southwest Diaspora Congress,. Sidii caadada ahayn shirka waxaa ka soo qayb galay bulsho waynta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kala jooga 5-ta qaaradood ee aduunka sida Aqoonyahanada, Saraakiisha, Haweenka iyo Dhalinyarada.
Waxaa shirka marti ku ahaa Madaxwaynaha Maamul Goboleedka Seddaxda Gobol Shariif Xassan Sheekh Aadan, dood iyo su’aalo badan ka dib, hadaan nahay golaha Qurbo joogtada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan go’aansanay inaan la wadaaggo dhamaan Shacbiwaynaha Koonfur Galbeed, waxaan kuwada hadalnay.
1. Madaxwaynaha Maamulka Seddaxda Gobol Shariif Xasan waxaa uu cadeeyay in isaga iyo Odayaasha Dhaqanka ay raali ka yahiin 10 Xildhibaan oo aan u dhalan Deegaanka inay ka mid noqdaan Baarlamaanka xulistiisu ay ka socoto Magaalada Baydhaba.
a) Hadaan nahay aqoonyahanada iyo indheer-garatada ka soo jeedo Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan aaminsanahay in Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Koonfur Galbeed ay maanta la gaaray in qolo kasta ay awood u yeelato inay xukunto goboladeeda, sida maamulada kale ee Soomaaliya. Sidaa awgeed ma qabno in dad lagu maslaxeeyo inay ka mid noqdaan degaan aysan asal ahaan ka soo jeedin. Waxaana ugu baaqeeynaa bulshowaynta Koonfur Galbeed Soomaaliya inay meel uga soo wada jeestaan dulmiga iyo cadaalad darada ka socota degaanadooda.
2- Madaxwayne Shariif Xassan Sheekh Aadan asagoo ka jawaabaayay su’aalaha ahayd dhibka ay ku hayaan isbaaroooyinka degaanadaas, waxaa uu sheegay inay jiraan isbaarooyin badan oo yaala gobolada Baay iyo Shabeelaha Hoose, waxuuna iska fogeeyay in isbaarooyinkaas uusan shaqo ku lahayn Maamulkiisa.
b) Waxaan ognahay hadaan nahay bulshada reer Koonfur Galbeed inay isbaarooyinka yaala Shabeelaha Hooose iyo guud ahaan 3 gobol ay mushkilad wayn ku hayaan shacabka reer Koonfur Galbeed, taas awgeed kuma aanan qancin jawaabta uuna siiyay Madaxwaynaha, anagoo og inay maamulkiisa ay qayb ku leeyihiin isbaarooyinka meesha yaala. Waxaan ugu baaqeenaa maamulka inuu waxka qabto arimaha la xiriirra isbaarooyinka si dhibka looga dulqaado bulshada danyarta ee degaanka ka soo jeeda.
3- Mar wax laga weeydiiyay dadka sida gardarada loogu xasuuqay Gobolada Bakool iyo Shabeelaha Hoose. Wuxuu sheegay Madaxwyne Shariif Xasan in sida loo buun buuninaayo aysan ahayn dadka lagu laayay Bakool, Shabeelaha Hoose iyo Baay.
c) Waxaan nasiib daro ah inuu maamulka dafiro mushkilada bani’adanimada ka baxsan ee xasuuuqa loo geesto dadka shacabka uu mas’uulka ka yahay, waxaa murugo ah in maamulka uusan marnaba ka hadlin dhibka loo geestay shacabkaas lagu gumaaday goboladaas. Taas awgeed waxaan canbaarenaynaa aamus’naata maamulka Seddaxda Gobol uu ka aamusan yahay xasuuqaan.
4- Wuxuu kaloo Madaxwaynaha ka hadlay inaysan awood u lahayn dhisida ciidanka degaanka, asagoo taas ku micneeyay dhaqaale la’aan awgeed, tasoo kaliftay inuu kula heshiiyo dadka aan degaanka u dhalan maamulka.
e) Waxaan aad uga xunahay in hogaanka Maamul inuu markasta isticmaalo awood la’aan haaysta dadka, tasoo aan u aragno inay niyad jabin karto shacabwaynaha Koonfur Galbeed, taas awgeed waxaan aaminsanahay in Bulshadaan ay awood u leedahay inay difaacdo jiritaankeeda iyo sharafkeeda sideey horey uga difaacday ayadoo intaan ka awood yar. Waxaan u sheegeeynaa in maamulka uu ku kalsoonaado awooda shacabkiisa si uu uga maarmo siyaasadiisa ku dhisan inuu markasta ku tiirsanaado dadkale.
Hadaan nahay qorbo joogada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan ugu baaqeeynaa shacabwaynaha ku abtisada inay diyaar u noqdaan ka qayb qaadashada Nabada iyo Dib u dhiska Goboladooda si ay umadaas u helaan isbadal Siyaasadeed oo samata bixiya shacabka.
Halku Dhigeena Waa MIDNIMO, AWOODSIIN IYO ISBADAL.
12 Responses for “AKHRISO: Go’aanadii Ka Soo Baxay Kulankii Golaha Qurba Joogta Koonfur Galbeed Soomaaliya”
Qurbajoogta k/galbeed iyo wargeyska ishabaydhabo aad baad ugu mahadsan tihiin sida aad ugu dadaashan wacyi gelinta shacabka.iyo mowqifka aad ka gaarten qalaadadka uu wado mamulka shariif xasan ,kuwaso aad ugu fog dhabta.. .
Maasha alaah, waa ururkii aan sugeeynay ka mid noqda waakanaa webside-kiisa http://www.swdiaspora.org/
abdulkadir mukhtar says:
Qurba joogey waxaan idin leeyahay noqda kuwii umadooda badbaadin lahaa laakiin hada waxaan idiin aragnaa kuwo taageeray damiir laawayaasha uuhogaanka uu uhayo sakiin
Qurba joogey wadankaas difaac iyo xoreyn buu ubaahan yahey eexayeysiin shariif uma baahna marka aad suaaleysaan sakiin yaa dooryay??? mise arooskii baydhabo loogu dhigay ayaa doorasho utaqaanaan aaway damiirkiina dad nimo fadlan umadiina u naxa masiirkooda ee ha taageerina sakiin iyo calooshooda ushaqaystayaasha sidi ii nebideey
Ilma adeeriyaalow caadif yey na qaadin dadkan ma ahan dad ma tala qurbo joogta iyo dal joogtada reer k/galbeed waa shaqsiyaad firfircoon oo media u furtey iney dadka ku afduubtaan, waxaana ku waaninaya iney urur siyaasadeed furtaan oo si toos ah siyaasada u galaan oo albaabka siyaasadana sidaas kusoo galaan. iskana dhaafaan dhaqanka ku dhisan multiproposeka ama ujeeda badanka ,waayo waa dad sheegta saxaafad ,marna waxay sheegtaan ururo k/galbeed iyo kuwo Somalida iska leh taas waxay na tuseysaa iney yihiin xil iyo xoolo doon
Hakaba, hurdadaada ku noqo, jiifo, waxaan tahay qof aan aduun la soconin dhulka dadkii lahaa baa u istaagay oo aqoon iyo lagacba haaysta. Hoordaayi Jiifo, intaad jiiftay aduunka waa isbadalay.
Ishabaydhabo waad mahadsantihiin laakiin naga daaya shariif sakiin sheekadiis wax dan u ah mahaayo umada reer koonfur g/beed taasi waxey idin tuseysaa ka aamusanaanta ka aamunsayahay xasuuga loo geysano shcabka arlaadi hadaba halagu tashin sakiin iyo wax lamid ah hala raadiyo dad wadaniyiin ah
Reewing wey Ki maag magitey KARSINOW I DUBINOW DHATIYO FUDAA KI DHUMEE inta aann kumashquulsananay shirar iyo waxyaalo kale dadbaa caafimaad daro iyo dhaawac u dhimanooyaa ee quba joog waxaan kula talin lahaa anoo weliba ka mid ah in ay ogaadeen in shariifka owsan kursiga ku hekin ogolaanshaha shacabka digil i mirif ayna keensadeen dad aan waxba ku lahyn deegaanka taasina waa siyaasad qota dheer oo laga soo shaqeeyey ayna sal ku haeyso TEYDA ANAA ISKA LEH TAADANA KULA LIHI ee dadkii shaley xilkan u dhiibtey shariifka kuma dhici karo in ow xil u diido ee isbedel dhab ah ayaa loo baahan yahay ee wixii dhiig lahow kaca
af waakoo may liki aamee xadal kaliya ayaad ku fiican tihii balse in aad wax dhiibtaan waa idin udur Xadaba xadal Dhul laguma Hureeyo ee jaabkiina Gacanta geliya Aqon yahanadan Baxsaday Qurba joogta waa Kholo is bahaysatay oo ka koban america bale 5 ta Qaarad ay sheegayaan waxba kama jiraan waa wax aan ka warqabin Qurba jogta arabta mida kale kuwa shariif xasan wax ka sheegayaan waxaan u arkaa kuwo atifat qabiil ku xadla iyo khof neceen waxana u leehaya hala keno Qofka dhaama shariif xasan waxaana xaqiiqo ah shariif xasan hadii aan aan imaan lahayn hal gobol iyo Bar ayaa la waayi Lahaa Runta Haleysu sheego
AW run sheeg aniga waa soo jeedaa lkn adigaa maalin cad riyo ku jirtaa waayo shaley waxaad lahaydeen shariif xasan ma aqoonasi maatana madaxweyne ayaad leedahay berina adoo difaacaya aan kaa sugaya waana astaanta caado qaatayaasha lugu garanayo, mida kale waxaa tiri dulka dadkii lahaa ayaan ahay basle aniga ma garanayo meel adiga degtid lkn aniga waan ku garanayaa waxaa tahay parasitic oo micnaheeda ah xaywaan xaywaan ku dul nool sida shilinta .intirta iyo goriyaanka ,
Aniga waxay ilatahay inaan lagu mashquulin waxa yaalaha qaar ee aad ku mashquulaan waxa wanaag ah ee Umadaneena dhibaatada badan soo martey wax u taraya , tan labaad hadalka Shariif hasan (madaxweynaha) halaga fiiriyo dhinacyo badan aydoo xaqiiqada wadanka ka jirtana aan la iska indho tiri karin. hadii masiirka Umada wax loo dhimayo waa si asluubeysan oo talo soo jeedin ah mas;uuliyiinta umadeena iyo qeybaha kala duwan ee bulshada lagu wargeliyaa.
Shariif Hasan (madaxweynaha) Maanta wuu joogaa berina wuu maxayaa marka waa inaan xooga saarnaa sidii Instutition dhaxal-gal ah sidii ay umadaan u heli laheyd. waxaa kale oo aad maanka ku haysaan Umada Soomaliya joogta inay hog-ogaal u yihiin ka waxyaalaha ka socda K/Galbeed hadey noqon laheyd Siyaasada, Nabadgelyada, Waxbarashada, Caafimaadka iyo kuwa kale oo badan.
waa loo baahan yahay Qurbajoogta fikradahoodii dhamaan laakiin fikradaha la soo jeedinayo waa inay ahaadaan kuwo wax dhisa.